अमेरिकी गुप्तचर निकायले भन्यो तालिवानले ७२ घण्टा भित्र कबुल कब्जामा लिन सक्छ!
Home समाचार अन्तरास्ट्रिय अमेरिकी गुप्तचर निकायले भन्यो तालिवानले ७२ घण्टा भित्र कबुल कब्जामा लिन सक्छ!
अमेरिकी गुप्तचर निकायको अनुसार तालिबानले आउँदो ७२ घण्टाभित्रै अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अनुमान सीएनएनले जनाएको छ । ती सामग्री तालिबानको हातमा पुगेमा प्राेपागान्डाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम हुने भएकाले त्यस्ता सामाग्री नष्ट गरेको जनाइएको छ । अमेरिकाले काबुलमा रहेको आफ्नो दूतावासका संवेदनशील सामग्रीहरु नष्ट गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
तालिबान लडाकु राजधानी प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला अमेरिका र बेलायतले सेना पठाएर अफगानिस्तानबाट आफ्ना कुटनीतिक कर्मचारी तथा रोकिएका आफ्ना नागरिक लैजान थालेका छन् ।
Previous articleगृह जिल्लामा रासस महाप्रबन्धक सिद्धराजलाई सम्मान |
Next articleतिमी र म
रहेनन् पेरुका विद्रोही नेता गोञ्जालो